10 Toeran-kaleha lehibe miaraka amin'ny sahan'ny Tenisy | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Toeran-kaleha lehibe miaraka amin'ny sahan'ny Tenisy
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Skotlandia, Fiaran-dalamby Spain, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 02/10/2021)
Eny an-tampon'ny arabe malaza any Paris, na eo afovoan'ny tendrombohitra Scottish na Alpes, ireo no toerana fialan-tsasatra tadiavina indrindra any Eropa. Ary, ireo 10 ny toerana avo indrindra misy ny kianja tenisy dia hanome hery anao hatrany amin'ny tsio-drivotra voalohany sy miakatra amin'ny lalao vaovao. Solo na mpivady, ho tianao ireo toerana manaitra sy ny kianja filalaovany tenisy ireo.
1. Toerana tsara indrindra any Frantsa miaraka amin'ny kianja filalaovana tenisy lehibe: Mouratoglou Tennis Academy
Ny French Riviera dia iray amin'ireo toerana fialantsasatra voalohany any Frantsa, avelao ihany i Eropa. Fijery tendrombohitra Alpine, ny lagoon manga, sy morontsiraka fasika, dingana vitsivitsy monja miala ny kianja tenisy Mouratoglou. Mijery ny Ranomasina Ionia, ity kianja filalaovana tenisy manara-penitra ity dia toerana mahafinaritra hampiofanana ny volanao miaraka amin'ireo mpampianatra tenisy ambony any Eropa..
Ny Akademia tenisy Mouratoglou dia mandray ireo karazana mpilalao rehetra amin'ny ambaratonga rehetra. Misokatra isan'andro ny kianja tenisy Mouratoglou. Nandritra ny nijanonanao tao amin'ny hotely & ala nenina, afaka mamandrika fitsarana mandritra ny adiny iray isan'andro ianao. Ny kianja filalaovana tenisy Mouratoglou mahavariana dia anisan'ny malaza manerantany Mouratoglou Academy ary nanana mpilalao tenisy tsara indrindra teto amin'izao tontolo izao teto ary nanohy ny spa na ny tora-pasika hotely hialana sasatra sy hiala sasatra.
2. Toerana fialan-tsasatra mahavariana any Italia miaraka amin'ny fitsarana tenisy: The San Pietro Di Positano
Ity kianja filalaovana tenisy lehibe ity dia natokana ho an'ny vahiny hotely Il San Pietro. Ny kianja filalaovana tenisy 5 Positano dia manolotra ny Ranomasina Mediteraneana sy ny morontsiraka Amalfi mahafinaritra. Ny kianjan'ny tenisy San Pietro dia any Positano, iray amin'ny 10 toeran-kaleha mahavariana indrindra hitsidika an'i Amalfi Coast, ary Italia mazava ho azy.
Ny fitsangatsanganana any Amalfi dia nofinofin'ny tsirairay. Ny morontsiraka, ny tanàna mahafinaritra, fiainana an-dranomasina, ary ny fijerin'ny carte postales dia nohosorana tany an-tokotany lehibe ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny tennis, afaka mangataka bebe kokoa ve ny olona? Raha reraka ianao amin'ny fampiharana ny lalao ataonao, afaka midina amin'ny morontsiraka vatokely ianao, na mandeha irery mitaingina lakana miaraka amin'i Positano mahatalanjona.
Milan mankany Naples miaraka amina lamasinina
Florence mankany Naples miaraka amina lamasinina
Venise mankany Naples miaraka amina lamasinina
Pisa mankany Naples Miaraka lamasinina
3. Tizy no kianja filalaovana tenisy tsara indrindra any Angletera: Headland, Cornwall
Coves be vato, morontsiraka fasika, ny Ranomasina Atlantika manga, ary trano bongo anglisy any moorland maitso, Cornwall dia iray amin'ireo toerana fialantsasatra mahafinaritra any Angletera. Ny saikinosy manaitra dia mety tsara amin'ny fialan-tsasatra amoron-tsiraka, ary tsara hetsika ivelan'ny trano, toy ny fanatanjahan-tena tenisy na rano.
Ao amin'ny Cornwall, afaka misafidy ianao 4 kianja filalaovana tenisy hilalao lalao lehibe. Ohatra, Ny club Penzance Tennis dia misokatra ho an'ny mpitsidika sy mpilalao rehetra amin'ny ambaratonga rehetra. Na izany aza, ny kianja filalaovana tenisy tsara indrindra dia ao amin'ny Hotel Headland any Newquay. Mijery ny torapasika Fistral sy ny Oseana Atlantika, ny Headland dia hotely manankarena, miaraka amin'ny fotodrafitrasa tsara any ivelany mba hijanonana ho mavitrika amin'ny fialantsasatrao amin'ny morontsiraka anglisy mahavariana.
4. Toerana fialantsasatra fialantsasatra ambony any Suisse: Lapan'i Gstaad
Mpizahatany maro no mety hahafantatra ny tanànan'i Gstaad ho tanin-dririnina, saingy angano fahavaratra ihany koa io. The Nanketo Alpes eto Soisa mahavariana amin'ny lohataona, miaraka amin'ny toetr'andro mahafinaritra amin'ny fitsangatsangana, bisikileta, ary lalao tenisy. Gstaad dia toerana mahafinaritra ho an'ny fialantsasatra mavitrika any Soisa, miaraka amin'ny fomba fijery manjavozavo sy ny rivotra alpine vaovao voajanahary izay hampisondrotra ny haavon'ny angovo anananao.
Araka ny voalaza etsy ambony, Gstaad dia toeran-kaleha lehibe indrindra amin'ny fialantsasatra tennis any amin'ny Alpes Swiss. Manomboka amin'ny kianja tenisy misy kintana 5 ao amin'ny hotely fandraisam-bahiny Gstaad Palace ka hatrany amin'ny Swiss Open J. Sehatra tenisy Safra Sarasin, ary ivon-toeram-panatanjahantena club Gstaad, miankina aminao ny safidy, ny fomba fijerin'ny Alpine dia miandry isaky ny fitsarana tsirairay hampihatra ny hetsika ataonao amin'ireo mpilalao tenisy tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Basel hifangaro amin'ny lamasinina
Geneva mankany Zermatt miaraka amina lamasinina
Bern mankany Zermatt miaraka amina lamasinina
Lucerne mankany Zermatt miaraka amina lamasinina
5. Milalaova Tenisy ao amin'ny Farihy Geneva, Soisa
tony, maitso sy manga, hatsarana voajanahary mahatalanjona, Toerana fialan-tsasatra mahagaga ny Farihin'i Genève. Ny tontolon'ny Alpine any aoriana dia mahasarika ny mpitsidika mandavantaona, amin'ny faran'ny herinandro ski mahafinaritra, na fialantsasatra fitsaharana amin'ny lohataona. Eto, afaka misafidy amin'ny fitsangatsanganana an-tanety Alpine ianao na miala sasatra eo akaikin'ny farihy, avy mijanona ho mavitrika na mangatsiaka, na izany na tsia, ny safidinao dia hahatonga anao hahatsapa ho salama sy hahazo tanjaka.
Koa satria ny Lake Geneva no toerana mety indrindra amin'ny fialamboly ivelany, ny kianja tenisy eto dia manampy amin'ny fanintona sy mahasarika mpilalao tenisy manerantany. Manolotra kianja filalaovana tennis mahavariana ireo hotely sy hotely eto, ary ny faran'ny herinandro dia afaka mankafy mpitovo na mpivady ihany koa’ lalao amin'ny iray amin'ireo klioba tenisy ao amin'ny Lake Geneva. Ity gem Switzerland ity dia mandray ny mpilalao amin'ny ambaratonga rehetra sy amin'ny teti-bola rehetra.
Lyon mankany Genève miaraka amin'ny lamasinina
Zurich mankany Genève miaraka amina lamasinina
Paris mankany Genève miaraka amina lamasinina
Bern mankany Geneva miaraka amina lamasinina
6. Toeran-kaleha lehibe miaraka amin'ny sahan'ny Tenisy: Andro fialantsasatra amin'ny tennis ao Paris
Tsy fantatrao fa ny renivohitra tsara tarehy sy tantaram-pitiavana an'izao tontolo izao dia manana kianja filalaovana tenisy tsara indrindra any Eropa. Ny iray amin'ireo toerana ireo dia miafina ao amin'ny arrondissement faha-12, Paris’ klioba tenisy afovoany. Satria miafina amin'ny arabe taloha any Paris ny klioba, ity kianja filalaovana maoderina ity dia niova ho kianja filalaovana tenisy lehibe avy amin'ny tranon'omby. Raha hitanao fa sarotra ny mino dia tongava mijery, satria misokatra ho an'ny rehetra ity klioba tenisy ity.
Satria manonofy ny ho tonga any Paris ny olon-drehetra, ary maro no manatanteraka ny nofinofy mandritra ny androm-piainany ny mandeha any Paris na mifindra maharitra, tena be olona ny tanàna. Noho izany tsy mahagaga raha miakatra amin'ny tampon-trano ny sasany amin'ireo orinasa malaza indrindra ao Paris. Toy izany koa ny any amin'ny kianja filalaovana tenisy, raha any amin'ny firenena maro dia any ivelany ireo, in Paris, azonao atao ny mampihatra ny dianao ambony gara, amin'ny Atlantika Garden, miaraka amin'ny fahitana an'i Tour Montparnasse.
7. Milalaova Tenisy Ao amin'ny Pikes Hotel Ibiza
Ny nosy Espaniola dia malaza noho ny fety mahafinaritra, trano fandraisam-bahiny mihaja, sy ny tora-pasika. Ho gaga ianao raha mahafantatra fa manana ny sasany i Ibiza ny fomba fijery mahatalanjona indrindra any Espaina. Ilay nosy be vato, morontsiraka volamena, ary ny ranomasina madio dia mamorona sary izay manadino ny rehetra mandihy mandritra ny alina. fa tsy, miposaka miaraka amin'ny masoandro izy ireo, hitsena andro mahafinaritra hafa any Ibiza.
Ary, ny any ivelany any amin'ny nosy Espaniola dia mahatonga ny nosy ho tonga lafatra ho an'ny fialantsasatra mavitrika. Manome toerana fanatanjahan-tena tsara ireo trano fandraisam-bahiny, toy ny kianja filalaovana tenisy mahafinaritra. Iray amin'ireo toerana tsara indrindra amin'ny lalao tenisy irery ny kianja mavokely Pikes Hotel. Ity kianja filalaovana tennis ity dia mitazana ny ranomasina misy havoana maitso manodidina azy sy ny lanitra manga eny amboniny. Tonga lafatra ho an'ny mpitovo, na avo roa heny, raha mpankafy tenisy ianao, avy eo Pikes ao Ibiza dia tsy maintsy atao.
8. Tenuta Delle Ripalte Elba Island, Tuscany
Vitsy ny trano fialan-tsasatra ao amin'ny Elba Island no tsy manana kianja filalaovana tenisy. Ny Nosy Elba any Tuscany dia eo amoron-dranomasina, eny ivelan'ny lalan'ny tanimboaloboka sy ireo villa italiana, fa toy ny manonofy ihany koa. Elba Island dia iray amin'ireo toerana ambony snorkeling any Eropa, ary hanaiky ianao raha vao mandeha any ambany ary na eo aza, raha mankafy ny vondronosy lehibe indrindra any Italia.
Ary noho izany, Elba Island dia toerana fialantsasatra mahafinaritra. Manampy amin'ny fahafinaretana amoron-dranomasina, afaka milalao irery ianao na mamirapiratra ny tombotsoan'ny mpivady herinaratra amin'ny iray amin'ireo hotely ambony’ kianja filalaovana tenisy. Araka ny voalaza etsy ambony, ny toeram-pialan-tsasatra rehetra any Elba dia manolotra kianja tenisy tsy miankina, dobo filomanosana, na morontsiraka manokana. Rehefa afaka mitsambikina avy amin'ny kianja mankany amin'ny ranomasina ianao amin'ny dingana iray, miaina ny fiainana tsara ianao, azo antoka.
Rimini mankany Florence miaraka amina lamasinina
Roma mankany Florence miaraka amina lamasinina
Pisa ho any Florence miaraka amina lamasinina
Venise mankany Florence miaraka amina lamasinina
9. Toeran-kaleha lehibe miaraka amin'ny sahan'ny Tenisy: Fialan-tsasatra tenisy any Ekosy
trano fiarovana, zohy fialofan'ny, Toetoetran'ny hantsana sy havoana skotika, ny fitsangatsanganana any Ekosy dia miverina amin'ny fotoan'ny knights sy ny angano. Na dia tsy voakasiky ny fotoana ao anaty aza ireo trano fatana misy ravina sy trano mimanda, ny maitso lehibe any ivelany dia mahazaka mpandeha ankehitriny. Manomboka amin'ny dobo filomanosana ka hatrany amin'ny sehatry ny tennis, ny antsipiriany rehetra dia natao hanomezana ny mpitsidika izay rehetra ilainy lavitra ny trano.
Noho izany, raha maniry lalao tenisy ianao, na mitsangatsangana mankany amin'ny fomba fijery ambanivohitra mahafinaritra, Toerana mahafinaritra i Scotland. Ny teny dia tsy hampita tanteraka ny zavatra niainan'ny fialantsasatra any Ekosy mandra-pahitanao ny hatsaranao ho anao. Rehefa ao anaty voninahitra voajanahary toy izany ianao, hankamamianao ny minitra fahafinaretana sy fialan-tsasatra any ivelany.
10. Fetin'ny fialamboly ao Salzkammergut Aotrisy
Azonao atao ny manoratra tononkalo eo akaikin'ny farihy, mijery ny filentehan'ny masoandro, miaraka amin'i Strudel. Etsy ankilany, mety handray ny fiaran-dalamby Schafberg mankany amin'ny Lake Wolfgang be voninahitra any Salzburg ianao. Ny faritry ny farihy Salzburg dia tena tsara tarehy ary toerana fialantsasatra lehibe eo amin'ny natiora. Fijerin'ny farihy, Tany kijana ahitra, Ny làlan'ny fitsangantsanganana fivahinianana masina eo anelanelan'ny St Gilgen sy St Wolfgang dia fomba mahatahotra hananganana ny herinao.
Mandritra ny fitsidihan'ny ankamaroan'ny mpitsidika ny farihin'i Wolfgang, toerana fialantsasatra mavitrika mahatalanjona io raha ny marina. Ankoatra ny fitsangantsanganana mahafinaritra, azonao atao, ny faritra Austrian dia mahavariana ho an'ireo tia tennis. Ny trano fandraisam-bahiny ao Salzkammergut dia manana kianja filalaovana tenisy mahafinaritra toa an'i Alpine sy farihy. Noho izany, raha ny nofinofinao mandritra ny androm-piainana dia fialantsasatra tennis any Austria, Salzkammergut no toerana tsara indrindra.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao handamina fialan-tsasatra mavitrika lehibe. Ireo 10 toeran-kaleha ambony dia manana fomba fijery mahafinaritra sy kianja tenisy mahavariana. Noho izany, afaka mampihatra ny lalao soloanao na amin'ny lalao mifanohitra amin'ireo namanao ianao, mamorona fahatsiarovana mahafinaritra amin'ny fialantsasatra mahafinaritra anao.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Toerana Top 10 Miaraka amin'ny kianjan'ny Tenisy” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fen%2Ftop-destinations-tennis-fields%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manova ny / es ho / fr na / de sy fiteny maro hafa.
Ny fialam-boly tsara indrindra Parks In Eoropa
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe